Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Malik Abou Abdelkarim
Malik Abou Abdelkarim waa hoggaanka sare oo ka mid ah dagaal-yanada oo ka mid ah kooxaha argaggaxisada, al-Qaacida ee Dhulka Magrib (AQIM). Inta Abdelkarim uu xukunka uu u hayay, kooxdiisa waxay heshey hub oo waxayna fuliyeen afduubyo iyo weeraro argaggaxiso oo tiro hoosaad ah oo ay ka fuliyeen Waqooyiga iyo Galbeedka Afrika. Abdelkarim waxaa la soo sheegey inuu mas’uul ka yahay dilalkii qofkii Faransiiska ee todbaatan-sideed jirka ahaa oo af-duubka loogu haystey Niger bishii Luulyo 2010. Weerar la qaadey bisha Juun 2010 oo uu qaadey kooxda Abdelkarim taasoo sababtey dhimashadii 11 ciidamada baliiska ee dalka Aljeeriya.
Al-Qaacidada Dhulka Islaamka Magrib (AQIM), oo horey loo yaqaaney sida Kooxda Salaafist ee Khudbada iyo Dagaalka (GSPC), oo ay dhor weeraro argaggixo ah ka fulisey deegaanka waqooyi-galbeed ee Afrika. AQIM waxay sheegatey mas’uuliyadda bamamkii isbiimeyska, af-duubyada reer Galbeedka, toogsho, iyo weeraro miino macmal ah. Bisha Diseember 2007 kooxda waxay fuliyeeen laba howlo qarax ee isbiimeys oo wada-socda, iyagoo weerarey xarunta barnaamijka Qaramada Middoobey iyo Golaha Dastuurka Aljeeriya, iyadoo lagu diley 42 qof oo 158 oo kalena lagu dhaawacey. Sidoo kale AQIM waxay mas’uuliyaddeeda ay sheegatey dilkii muwaadin Amerikan ah Christopher Leggett oo dhacey bisha Juun 2009, isagoo Mauritania ka fulinayay howlo diimeed. Bishii Siteember 2012 dhexdeeda, AQIM waxay xubnaheedu ku dhiirigelisey in hanjebaadyo loo gudbiyo safaaraddaha Mareykanka oona la dilo daljirayaasha Mareykanka. Bisha Siteember 2006 AQIM waxay ku dhawaaqdey in si rasmi ah ay ula middoobeen ururka al-Qaacida, oo tan iyo maalintaasna ay dib u xaqiijiyeen waxay ku hamineyaan oo ah in ay bartilmaameedsanayaan meelaha reer Galbeedka.
Waaxda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa GSPC u magacwodey in ay yihiin Urur Argaggaxiso Shisheeye sida hoos timaada Qeybta 219 ee Xeerka Laanta Socdaalka iyo Jinsiyadda (sida dib loogu saxay) 27 bisha Maarso 2002, oo loogu cusbooneysiiyey kooxda u magacaabideeda sida hoos timid magaca cusub ee kooxda AQIM 16 bisha Oktoobar, 2009. Waaxda Maaliyadda Mareykanka waxay kooxdu u magacowdey in ay yihiin Qeyb Argaggixiso ee Gaar ahaan u Magacaaban kuwaasoo hoos yimaada Amarrada Dowliga ee 13224 ee 21 bisha Fibraao, 2008.
Taariikhda Dhalashada: 1972
Magacyada La Sheegto: Abd al Karim, Abou
Abdoul Karim, Abu Abd al Karim al Tariqi, Abou Hamid Abdel Karim, Abd al Karim Malian ka